Madagascar: Rasoanambinina Vavimarino - Gender Links
Drivers of Change Madagascar: Rasoanambinina Vavimarino...
Madagascar: Rasoanambinina Vavimarino
Tamin’ny volana novembre 2009 no voalohany niarahako tamin’ny gender links .tao amin’ny kaominina no nombohaka niarahana niasa tamin’ny alalan’ny CECJ ary mbola mitohy hatramin ‘ izao.nomena fiofanana mikasika ny atao hoe: Miralenta sy ny fampandrosoana ary miafara amin’izao asa fandraharahana izao.
Tamin’ny fiaraha-miasa niaraka tamin’ny gender links dia ananko ny famantarana ny fomba fijery miralenta sy ny fomba fitantanana ara-bola mikasika ny asa fandraharahana fa ny lesoka dia ny fahatapahan’ ny famatsiam-bola tao amin’ ny CECJ satria ao no misy ny asa fanentanana momba ny miralenta nefa tapaka ka tsy afaka mandroso asa ,eo amin’ny asa fandraharahana kosa dia tena tsy misy mihintsy ny famatsiana ara-bola fa miady irery ny mpandraharaha afa tsy ny fanohanana ara teknika izay ekena fa tena zava-dehibe ihany koa.
Nisy fiovana teo amin’ny fiainako satria afaka mampianatra ny zanako ara-dalana aho ary efa eo andalam-panorenana trano.
Misy anjara biriky maro tamin’ny Gender Links indrindra ny fanofanana in-telo miatoana nandraisany anjara mikasika ny fitantananaara-bolan’ ny asa fandraharahana.
Nisy fiovana teo amin’ny traikefa sy ny fahaiza-manao, ohatra, fomba fijery ny irika ara-barotra ,fijerevana olona afaka miara-miasa sns.
Ny porofo entina hanamarinana izany dia ny fanomezana attestation tamin’ny faran’ny fiofanana,fampandraisana anjara tamin’ny fihaonambe an-tampony tao amin’ny le pavé
Tena nisy fiovan tokoa ny fifandraisako amin’ny fianakaviako satria efa tsy vesatra ho an’ny fianakaviako intsony aho fa efa mba mahaleo tena .Afaka mandray anjara amin’ny raharaham- pianakaviana .
Eo amin’ny lalàna kosa dia afaka mampahafatatra ny lalàna misy ho fiarovana ny zon’ny vehivavy aho ohatra, efa tsy afaka mamono ny vadiny loatra ny lehilahy amin’ny fahafantarany ny lalàna mifehy izany ary mampiova ny lehilahy sasantsasany na dia tsy izy rehetra aza.
Ny olana nosedraiko dia ny tsy fahafahako manana fidiram-bola hoentiko mikarakara ny tokatranoko.Ny fomba namahako izany olana izany dia amin’ny alalan’ny fahazoana asa natao (asa fandraharahana sy fampahafantarana ny miralenta). Amin’ny manaraka kosa dia hiezaka kokoa aho hampitombo ny vokatra azoko sy hanome torohevitra ny namako izay mbola ao antin’io olana io.
Misaotra betsaka ny Gender Links aho satria nanova betsaka ny fiainako ary hijoroako ho vavolombelona izany. Misaotra tompoko! Mangataka ny hitoizan’ny sommet isan-taona.